Ndị na-eri ihe anaghị azụrụ izu oke | Martech Zone
Satọde, Ọgọstụ 29, 2009 Fraịdee, June 12, 2015 Douglas Karr
Otu n'ime ihe ndị kasị ebube mgbanwe na m kwere na-elekọta mmadụ media emewo ka bụ mbibi nke zuru okè ika. Agaghịkwa atụ ndị ahịa anya izu oke… mana anyị na-atụ anya ịkwụwa aka ọtọ, ọrụ ndị ahịa, yana mmezu nke nkwa ọ bụla ụlọ ọrụ setịpụrụ atụmanya.
Na a ahịa nri ehihie urua urua Bitwise Ngwọta, President na CEO Ron Brumbarger gwara ndị ahịa ya na Bitwise ga- emehie ihe… ma na ha ga-eme ike ha niile iji nwetaghachi ha kpamkpam ma lelee anya maka ọdịmma nke onye ahịa ahụ. E nwere ọtụtụ ndị ahịa dị mkpa gburugburu tebụl - na mmeghachi omume enweghị ike ịbụkwu nchekwube. E nwere otu olu ịja mma maka ọrụ ndị ahịa na nkwado nke ndị ọrụ Bitwise nyere.
IMHO, ndị isi njikwa na-ejikarị eme ihe dị ịtụnanya nke ijigide izu oke site na izipu ozi, eserese, na mmekọrịta ọha na eze. Oge ndị ahụ dị n'azụ anyị ugbu a, ebe ụlọ ọrụ enweghị ike ijikwa ma ọ bụ megharịa mgbasa ozi mmekọrịta na ihe ndị ahịa na ndị ahịa na-ekwu banyere ha. Ndị ahịa gị ugbu a ji mkpịsị ugodi nke ika gị.
Nke ahụ nwere ike iyi ihe egwu na mbụ… ụlọ ọrụ gị nwere ike ị na-achọ ịdebe ha zuru okè ika dị ndụ. Echegbula onwe gị banyere ya. N'ezie… kwusi ya. Na-emebi ụlọ ọrụ gị karịa site na ịnwa ikpuchi mmejọ ya karịa ịkpọsa ha n'èzí. Everylọ ọrụ ọ bụla nwere ike na adịghị ike na ndị ahịa na ndị ahịa na-atụ anya na nsogbu ga-eme. Ọ bụghị mmejọ na-eme, ọ bụ otu ụlọ ọrụ gị si gbakee na ha.
Ọbụna n'ime ọkwa ngwaahịa na nyocha, nke a bụ ikpe. Ntụle 5-star nwere ike imebi ahịa gị n'ezie karịa inyere ha aka. Ka m na-agụ nyocha ngwaahịa, m na-agagharị na nyocha ndị na-adịghị mma. Anaghị m agbapụ nzụta, n'agbanyeghị. Kama nke ahụ, na-atụleghachi echiche na-adịghị mma, m na-ekpebi ma ndị ahụ bụ adịghị ike ndị m ga-ebi. Ree m nnukwu gadget nwere ezigbo akwụkwọ ụbọchị ọ bụla! Anaghị m agụ akwụkwọ ntuziaka maka ngwaahịa.
Mgbe m hụrụ ọkwa kpakpando 5, ana m ahapụ nyocha ahụ kpamkpam wee lelee ebe ọzọ. Onweghi ihe zuru oke ma achoro m ka emee ka m mara ezughị oke. Anaghị m azụ izu okè ọzọ. Ekwetaghị m izu okè ọzọ. N’ebe ngosi e-commerce n’afọ gara aga, otu onye na-emepụta ngwá elektrọnik kwuru na nyocha zuru oke na-emerụkarị ahịa ngwaahịa ha. Ọ dịghị onye ọzọ kwenyere izu okè, ma.
O nwere ike iyi ihe ezi uche na-adịghị na ya, mana ị nwere ike chọọ ịkwaa ike gị ma kweta adịghị ike gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịbawanye ahịa, setịpụ atụmanya, wee nwee ike mezuo ha. Onye ahịa nwere obi ụtọ abụghị onye ahịa nwere ngwaahịa zuru oke… ọ bụ onye ahịa nke nwere obi ụtọ na ụlọ ọrụ gị, otu ha si gbue ya nke ọma, yana - kachasị ihe niile - etu ị siri nwetaghachi mmejọ gị ma ọ bụ ọdịda gị
Tags: 5 kpakpandoahịa FimNyocha ndị na-azụ ahịanyocha ndị ahịaNyochantụle kpakpando